Ahoana no fomba hanesorako ny marika fiantsoana amin'ny fomba fijery? - Microsoft Outlook
Tena > Microsoft Outlook > Marka fiantsoana Outlook - valiny mahazatra
Marka fiantsoana Outlook - valiny mahazatra
Ahoana no fomba hanesorako ny marika fiantsoana amin'ny fomba fijery?
Raha mbola mifanena amin'ny telozoro mavo ianaofiantsoana, manolotra anao izahay hanandranamampandehany programa antivirus anao raha manana izany ianao. Manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hitantana nytoe-tsainaamin'ny maody azo antoka satria hanampy amin'ny famantarana ny fanampiana na fanitarana mety hiteraka olana izany.
Tongasoa eto amin'ny Windows Club! Eto izahay miaraka amin'ilay lahatsoratra hanampiana ireo mpampiasa hanamboatra ny lesoka izay ahitany ilay telozoro mavo miaraka amina feon-teny miantsoana ao amin'ny Word na Excel.
Amin'ny ankapobeny, ny lesoka dia toa sary masina telozoro misy teboka fiantsoana ao anatin'ny marika telozoro. Ny antony lehibe mahatonga an'ity lesoka ity dia miankina amin'ireo mpampiasa izay mampiasa ny programa Office 365. Ny fampiharana tsy an-tserasera dia tsy afaka maneso na mamerina angona avy amin'ny mpizara an-tserasera.
Amin'ity tranga ity dia tsy afaka manamarina ny fahazoan-dàlana izy ireo. Ka ahoana no hamahana izany? Ny tranga voalohany dia tsy miditra amin'ny kaontinao Microsoft ianao. Raha efa namaky tsara sy tsara ny lisansa taloha kanefa mahatsapa fa tapitra ny fahazoan-dàlana hanamafisana, dia afaka miditra amin'ny kaontinao Microsoft ianao.
Ity Word, avelao aho handika ny adiresy mailaka hiditra amin'ny kaontinao Microsoft, tsindrio ny rakitra, mankanisa any amin'ny lisitra eo ankavia, misoratra anarana ao amin'ny birao, kitiho ny fisoratana anarana, dia ampidiro ny id mailaka, misafidy manaraka ary miandry ny hamoahana azy dia ampidiro ny teny miafina. Tsindrio ny Sign In. Ny ampahany manandanja eto dia mila miditra amin'ny kaonty mitovy amin'ny nampiasainao hividianana ny fisoratana anarana Microsoft 365 na Office 365 ianao.
Izao dia nisoratra anarana izahay. Mbola mandrindra ve? Raha eny dia tsara izany. Raha tsy izany, ny safidy faharoa dia ny hivoaka amin'ny kaonty ary hisoratra anarana.
Amin'ity tranga ity dia mandehana any amin'ny faritra kaonty indray. Azonao atao ny manindry ny Hivoaka raha hivoaka avy ao amin'ny Office ary avy eo dia hiditra indray toa ny naseho teo aloha. Raha tsy izany, afaka manampy kaonty hafa ianao.
Azonao atao ny manindry Kaonty Switch. Tena marina izany ho an'ireo mpampiasa manana kaonty marobe amin'ny Hotmailor Outlook. Amin'ity tranga ity, raha tafiditra ao amin'ny Microsoft Word na Excel ianao miaraka amin'ny kaonty hafa noho ilay nampiasanao ny fividianana ny fisoratana anarana Microsoft Office.
Amin'ity tranga ity, ny kinova ivelan'ny fampiharana dia tsy afaka mamaky ny lisansa. Noho izany dia mila manova kaonty ianao ary mamadika azy amin'ilay ampiasainao hividianana ny famandrihana. Andao hieritreritra fa tsy mandeha izy roa.
Avy eo ny safidy farany anananao dia ny fampiasana ny Microsoft Support and Recovery Assistant. Toy izany koa no nohazavaina tamin'ity lahatsoratra ity momba ny The Windows Club. Ny rohy dia zaraina ao amin'ny fizarana famaritana.
Tsindrio fotsiny eto ary vakio ity lahatsoratra hafa ity amin'ny Microsoft Support and Recovery Assistant ary ny fampiasana azy. Tsy mora ve izany? Raha mbola manana fisalasalana ianao dia ampahafantaro anay ao amin'ny faritra misy ny hevitra. Aza adino ny misoratra anarana amin'ilay fantsona.
Misaotra anao nijery ity lahatsoratra ity ary mirary tontolo andro mahafinaritra!
Inona no dikan'ny marika fiantsoana ao amin'ny Outlook?
izanydia midika hoefa ny mpandefa dia nanindry ny safidy 'Zava-dehibe', izay asehon'ny anfiantsoana. izanydia midika hoefa ny mpandefa dia nanindry ny safidy 'Zava-dehibe', izay asehon'ny anfiantsoana.
Inona no dikan'ilay telozoro voasary ao amin'ny Outlook?
Ara-dalàna izanydia midika hoetsy afaka mifandray amin'ny mpizara mailaka izany. Zahao ny kaonty sy ny kaonty azonao antoka fa afaka mahatratra ny mpizara ianao.
Inona no dikan'ny fiantsoana mena amin'ny mailaka?
(totohondry sary) - Ny mailaka fisolokiana dia misy endrika sy habe rehetra, ary anio dia te hitety anao amin'ny iray amin'ireo mailaka fisolokiana azoko aho tamin'ny herinandro lasa teo momba ny nahalalako fa scam izany ary inona no nataoko momba izany . (logo beeping) hi ny anarako dia josh manantena aho fa hanampy anao ity torolàlana ity izay azoko foana ireto karazana mailaka ireto ary mino aho fa tsy mino ianao, ary tsy hitanao izany, ny sasany amin'ireo mailaka ireo dia mandeha ho azy nifindra tany amin'ny fampirimana spam fa ny sasany amin'izy ireo dia mahavita azy ary ity dia iray amin'ireo nanao izany ary tiako haseho anao ny tena zava-nitranga.
ajanony ny fampandrenesana onedrive
Eny ary, herinandro vitsivitsy lasa izay dia nahazo ity mailaka ity aho tamin'ny vehivavy iray antsoina hoe Jillian tao amin'ny Nody Law, izay nilaza tamin'ny ankapobeny hoe: 'Hitan'ny mpanjifanay' fa anao ity tranonkala ity, 'nampiasa sary tsy nahazoana alalana' ary tsy nisy noraisiko. ity karazana mailaka ity matotra satria amin'ny maha-bilaogera manana traikefa bilaogy 10 taona mahery, tsy nahy nampiasa sary taloha aho nefa tsy nahazo alalana tamin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona ary notafihan'ny mpisolovavan'izy ireo aho. Ka zavatra tena matotra io ary tsy te hiteny fotsiny aho na hanary azy ho tsinontsinona ary dia niezaka nanao izay fara heriny izy mba hahatonga azy ho matotra be. Hatramin'ny £ 150,000 no homena vola.
Manana hatramin'ny 30 aprily ianao vao hamaly, raha tsy izany dia tsy maintsy handray fepetra ara-dalàna izahay. Ireo zavatra rehetra ireo dia natao hanandrana hampatahotra olona izay mahazo ity mailaka ity. Ankehitriny, talohan'ny nandehanako sy novaliako azy dia nanao fikarohana taloha aho.
Te-hahalala aloha aho raha tsy te-tsindrio ny rohy rehetra ao amin'ny mailaka, tsy nanana izany, saingy nanana aho fa tsy te-tsindry na izany aza ary tsy te-handeha avy hatrany ny tranonkala satria mety misy malware izany. Ny zavatra nataoko voalohany ary hanana rohy mankany amin'ireo rehetra ireo aho, ireo loharano izay ampiasako amin'ny famaritana etsy ambany, fa nandeha tany amin'ny toerana misy ny Google Safe Browsing aho aloha. Raha ny tena izy dia mampahafantatra ahy raha misy tranokala mandady, na raha misy tranokala tiako hidirana dia misy malware na zavatra mitovy amin'izany.
Ka mitady nodylaw.com aho ary milaza amin'i Google fa azo antoka izany. Hoy izy ireo 'eny'. tsy misy atiny tsy azo antoka hita, tsara.
Nandeha tao amin'ilay tranonkala àry aho. Raha manandrana mamoaka azy ianao izao dia ho hitanao fa tsy misy izany. Aza atao ao anaty baran'ny adiresy io URL io.
Azoko antoka fa mbola tompony izy ireo ary afaka mitarika anao amin'ny toerana tadiaviny izy ireo. Saingy ny tranokala Nody Law Firm dia toa ara-dalàna. Nanova izy ireo hatramin'ny niantsoako azy voalohany ary tsara kokoa noho ny teo aloha izany.
Saingy izao dia, tranokala iray pejy fotsiny izany, izay heveriko fa tsy dia fahita firy ho an'ny orinasa mpanao lalàna. Ka io no saina mena voalohany, tranonkala iray pejy fotsiny. Azoko atao ny manandrana miantso an'io nomeraon-telefaona io, fa kosa nijerijery Whois momba ilay sehatra.
Ka niditra aho dia nizaha hoe iza marina no manana ny sehatra Nodylaw ary ny zavatra ho hitanao dia matetika tsy dia be loatra ny fampahalalana omeny anao, okay? Hiafina ao ambadiky ny tsiambaratelo eto ianao. Fa ny zavatra iray hitako fa mahaliana dia ny IPChina163 ny nameserver azy ireo. Tsy fantatro ny momba anao, saingy miahiahy mafy aho fa hisy orinasan-dalàna amerikana hampiantrano ny tranonkalany any Shina, amin'ny alàlan'ny mpampiantrano sinoa.
Ka izany no sainam-pirenena mena laharana roa amin'ireo saina mena be hitantsika. Ka manapa-kevitra aho, andao hojerentsika hoe inona ilay adiresy, aiza marina ity toerana ity? Nankany amin'ny sarintany google aho ary nitady ny toerana misy ny adiresy ary izany no hitako, saha iray. Ny tiako holazaina dia hoe, raha mihodina ianao, dia tena eo amin'ny manodidina izahay, ary tsy faritra avo be izany, ka tsy azoko an-tsaina ny fisian'ny orinasa iray eto.
Tsy misy dikany izany, ary mazava ho azy fa izany no fampitandremana fahatelo hoe tsy marina ny adiresinao. Ka ny zavatra farany nataoko teto izay noheveriko ho somary mampihomehy dia mazava ho azy, ny sary eto dia toa somary tena izy, ny sary tany am-boalohany dia sary mitahiry tahiry toa mampihomehy ka mazava tsara. Saingy handresy lahatra ahy ireo raha mahita azy ireo.
Ka naka aho ary nitady ny lahatsoratr'i Andrew eto. Noraisiko ny lahatsoratr'i Andrew ary notadiaviko tao amin'ny Google. Ary fantatrao ve izay hitako? hahitana orinasa roa samy hafa.
Voalohany ny orinasan'ny lalàna Jones. Ny Lalàna Jones any Manhattan dia toa manana mpisolovava telo, azonao ve izany? Gillian Scott, Andrew Michaels ary Robert Jeffries Scott, Andrew Michaels ary Robert Jeffries. Arakaraka ny nandavako no vao hitako hoe avy aiza izy rehetra.
Misy modely tranokala ao amin'ny pejin'ny orinasa Elementor, orinasa manangana tranokala ho an'ny olona te-hamorona tranokalan'izy ireo manokana, ary manana modely manokana ho an'ny firenen-dalàna antsoina hoe Markowitz sy Mellencamp izy ireo. Tsy orinasam-pitsarana tena izy fa orinasan-dalàna sandoka fotsiny izay nataon'izy ireo nanasongadinana ny tranonkalany, mampiseho izay azonao atao amin'ny tranokalanao. Raha ny mpiara-miombon'antoka amin'ny orinasa mpahay lalàna, araka ny mety ampoizinao, dia i Jillian Scott, Andrew Michaels ary Robert Jeffries.
Lahatsoratra marina. asa betsaka avy aminao mba hahafahanao mampiavaka ity tranonkala ity. Saingy tamin'ny ankapobeny dia nanakorontana tranokala modely izy ireo, nametraka izany tao amin'ny mpizara azy manokana tao amin'ny Nodylaw, ary nanandrana nampino ahy fa lalàna ara-dalàna izy ireo izao, mazava ho azy fa tsy orinasa mpanao lalàna izany.
Azo inoana fa fisolokiana io ezahin'i Jillian atao amiko, fa tiako ho fantatra izay ataony. Ka mandefasa mailaka aminy ary lazao hoe, 'Salama Jillian,' faly mihaona aminao. 'Azonao lazaina amiko ve izay sary araka ny hevitrao fa manimba ny zon'ny mpamorona anao?' Te hahita aho raha tena fantany hoe iza aho ary raha nandefa sary ahy tokoa izy ary nanao izany izy.
Hoy izy: 'Salama, ny sary voalohany amin'ny tranokala dia' ato amin'ity tranonkala ity 'ary nalefany tany aho ary nanam-bintana aho nahita izany ary hitako fa manan-jo hampiasa io sary io aho, nividy ny zon'ity sary ity aho ary mazava tsara araka izany. Tsisy olana. Saingy tiako ho fantatra izay tadiaviny. 'Ralehilahy, azafady indrindra' hoy aho. 'Karazana trosa na fandoavana inona no tadiavin'ny mpanjifanao?' Bilaogera kely fotsiny aho. 'Ary hoy ny navaliny:' Ny mpanjifakoTsy hangataka vola aho, tsy hanao fotoan-tsarotra 'mandalo eran'izao tontolo izao isika. 'Miezaka manararaotra izy fa mandalo ity areti-mandringana COVID-19 ity isika rehetra, izay heveriko fa mampihomehy. 'Ankasitrahany ny rohy mankamin'ny tranonkalany eo ambanin'ilay sary na amin'ny faran'ny lahatsoratra,' Fahamendrehana sary 'ary avy eo mankany amin'ilay tranonkala.
Eo ianao, mitady rohy dia izay. Hoy aho hoe: 'aleoko tsy mametraka rohy amin'ny bilaogiko.' Vonona hanaiky karama ve ianao? '' Tsy latsaky ny $ 5,000, 'hoy izy. 'Tsy zakako izany, ahoana raha maka sary fotsiny aho?' Ary hoy izy: 'Tsia, efa nampiasa ny sary ianao' ary nanao ny simba tamin'ny client-ko, noho izany dia manosika izy, manandrana mitaona ahy hatrany izy hampiditra rohy mankamin'ny tranokala ary hitohy mandra-pahazoako azy vao antsoina. ary nilaza hoe: 'Mihainoa, fantatro fa tsy tena mpisolovava ianao.' Ary nanontany azy vitsivitsy momba an'ity scam ity aho raha hamaly ary rehefa afaka izany dia tsy nahazo na inona na inona aho, fanginana tanteraka, nofafany ilay tranokala, nijanona ny adiresy mailaka ary manontany tena aho hoe inona ireo tranonkala vaovao apetrany ary inona no vaovao olona ezahiny hosokaina.
Izany dia momba ny rohy iray ihany. Tian'izy ireo ny rohy maimaim-poana amin'ny iray amin'ireo tranonkalako. Tena sarotra amiko ny hino, ary tena mampiseho izany fa tsy ny mailaka hosoka rehetra dia kendrena mba hahazoana ny laharam-piarovana ara-tsosialy, nomeraon-kara-trosa anao, na fampahalalana momba ny banky.
Misy fisolokiana isan-karazany mety hamely ny boaty fampidirana anao. Raha mahasoa ity lahatsoratra ity dia omeo ny ankihiben-tanana dia ampahafantaro ahy raha ilaina io karazana zavatra io. Azoko lazaina aminao bebe kokoa ireo mailaka hosoka azoko, koa avelao ny fanehoan-kevitra etsy ambany miaraka amin'ny iray amin'ny hosoka azonao, tiako hohenoina koa izany.
Misaotra nijery sy nikarakara.
Fa maninona no tsy mandeha ny marika fanentanana amin'ny fomba fijery?
Raha tsy mandeha ny karatra Intel ary averina ao amin'ny Device Manager indray dia hanjavona ny marika fiantsoana ary i Outlook sy Skype dia samy mifandray sy mijanona mandra-pahatongan'ny famerenana indray. Tsy mandeha ny toeran'ny herinaratra ao amin'ny mpamily karatra NIC.
Fa maninona no misy fiantsoana mavo ao amin'ny tambajotra ICON?
Amin'ny bootup, ny kisary tambajotra dia misy fiantsoana mavo eo amboniny. Hifandray sy hijery Internet izany. Na izany aza, tsy hifandray i Outlook sy Skype. Raha tsy mandeha ny karatra Intel ary averina ao amin'ny Device Manager indray dia hanjavona ny marika fiantsoana ary i Outlook sy Skype dia samy mifandray sy mijanona mandra-pahatongan'ny famerenana indray.
Inona no dikan'ny marika fiantsoana amin'ny telozoro mavo?
Telozoro mavo misy marika fiantsoana dia fampitandremana. Azonao atao ny manidina ny totozy raha hijery ny olana. Aza adino ny manisy marika ireo valiny ho valiny raha manampy izy ireo. Tsy hanahy momba izany aho, avy eo.
Ahoana ny fampidirana / manampy marika am-pitenenana ao amin'ny vatan'ny mailaka any Outlook?
Amin'ireo hitsin-dàlana manaraka ireto dia azonao atao tsara ny mampiditra marika accent amin'ny vatan'ny mailaka an'ny Outlook. Jereo ny pikantsary: ​​Ankoatra ny tetika etsy ambony, azonao atao koa ny mampiditra na manampy marika accent ao amin'ny vatan'ny mailaka Outlook miaraka amin'ny asan'ny Symbol namboarina. 1. Mamorona hafatra mailaka vaovao, ary kitiho ny vatan'ny mailaka hampavitrika ireo fitaovana Ampidiro. 2.